NSK Olimpijs’kyj — Kyiv (Kiev) မှာ ဗိုလ်ရွေးမယ့်ည | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » NSK Olimpijs’kyj — Kyiv (Kiev) မှာ ဗိုလ်ရွေးမယ့်ည
NSK Olimpijs’kyj — Kyiv (Kiev) မှာ ဗိုလ်ရွေးမယ့်ည
Posted by ေမာင္ ေပ on Jul 1, 2012 in Creative Writing, Hobbies & Games | 28 comments
သည်ကနေ ့1.7.2012 တနင်္ဂနွေည (သို ့မဟုတ်) တနင်္လာနံနက်မှာ ကန်ကြမယ့် ၊ ဘောလုံးဝါသနာရှင်များ စောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတဲ့ ယူရို၂၀၁၂ ဗိုလ်လုပွဲကြီးဟာ သိပ်မကြာခင်မှာ ကြည့်မြင်ကြရတော့မှာပါ ။
““စပိန်”” နဲ ့““အီတလီ”” အသင်းတို ့တွေ ့ဆုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ သည်နှစ်သင်းဟာ အုပ်စု စီ မှာ စပိန် အသင်းဟာ ၂ပွဲ နိုင် ၁ပွဲ သရေ ဝ ရှုံး ရဂိုး၆ ပေးဂိုး၁ နဲ့အုပ်စုဗိုလ်
အီတလီ အသင်းဟာ ၁ပွဲ နိုင် ၂ပွဲ သရေ ဝ ရှုံး ရဂိုး၄ ပေးဂိုး၂ နဲ ့အုပ်စုဒုတိယ အနေနဲ ့တက်လာကြတာဖြစ်ပြီး ၊ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ပြန်လည်တွေ ့ကြတာပါ ။
စပိန်အသင်းဟာ အုပ်စုအားနဲ ့ခြုံကြည့်ရင် ရဂိုးအများဆုံးနဲ ့ပေးဂိုးအနဲဆုံး အနေအထားမှာ တစ်သင်းထဲ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ် ။
စပိန် အသင်းဗိုလ်လုပွဲသို ့ချီတက်လာရာ လမ်းကြောင်းကတော့
10.6.2012 စပိန် ၁-၁ အီတလီ
14.6.2012 စပိန် ၄-ဝ အိုင်ယာလန်
18.6.2012 ခရိုအေးရှား ဝ-၁ စပိန်
23.6.2012 စပိန် ၂-ဝ ပြင်သစ် (ကွာတားဖိုင်နယ်)
27.6.2012 ပေါ်တူဂီ ဝ-ဝ စပိန် (ပင်နယ်တီတွင် စပိန်နိုင်)
အီတလီ အသင်းဗိုလ်လုပွဲသို ့ချီတက်ခဲ့ရာ လမ်းကြောင်းကတော့
14.6.2012 အီတလီ ၁-၁ ခရိုအေးရှား
18.6.2012 အီတလီ ၂-ဝ အိုင်ယာလန်
24.6.2012 အင်္ဂလန် ဝ-ဝ အီတလီ (ပင်နယ်တီတွင် အီတလီနိုင်)
28.6.2012 ဂျာမနီ ၁-၂ အီတလီ (ဆီမီးဖိုင်နယ်)
စပိန်အသင်းရဲ ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် အာဘီလိုအာ ၊ ပီကေး ၊ ရာမို ့စ် ၊ အယ်ဘာ
လယ် ဇာဗီ ၊ ဘက်စ်ကွက် ၊ အလွန်ဆို
ရှေ့ဆေးလ်ဗာ ၊ ဖာဘရီဂတ် ၊ အင်နီယေစတာ
အီတလီအသင်းရဲ ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများကတော့
နောက် အဘိတ် ၊ ဘာဇာဂလီ ၊ ချီလီနီ ၊ ဘယ်ဇာရက်တီ
လယ် မာချီစီယို ၊ ပီယာလို ၊ ဒီရော့စီ
ရှေ့ဘလော့တယ်လီ ၊ ကတ်ဆာနို
စပိန် နဲ ့အီတလီ တွေ ့ဆုံခဲ့မှုများကို ပြန်ကြည့်ရင်
10.8.2011 အီတလီ ၂-၁ စပိန် (ခြေစမ်းပွဲ)
22.6.2008 စပိန် ၄-၂ အီတလီ (ယူရို၂၀၀၈)
26.3.2008 စပိန် ၁-ဝ အီတလီ (ခြေစမ်းပွဲ)
သည်နှစ်သင်းရဲ ့လက်ရှိခြေစွမ်းပိုင်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကွာခြားချက်အကြီးစားတော့ မရှိပါဘူး။ ၂သင်းစလုံးဟာ ဂိုးမပေးရရေးကို အဓိကထား ကစားခဲ့တာကို တွေ ့ရပါတယ် ။ တစ်ခုရှိတာကတော့ စပိန်အသင်း ဟာ ပေါ်တူဂီနဲ ့တွေ ့တုန်းက ခြေမျိုးနဲ ့ဆိုရင်တော့ သည်နေ ့ညပွဲမှာ ကာလာမလှနိုင်ပါဘူး ။ အီတလီ အသင်းဟာ အုပ်စုပွဲစဉ်တုန်းက စပိန်နဲ ့၁-၁ တွေ ့ခဲ့တုန်းက ခြေစွမ်းတူ ကစားနိုင်ခဲ့ပြီး ၊ ကျန်အုပ်စုပွဲ၂ပွဲမှာ သူတို ့ခြေဟာ ပုံမှန်အဆင့်လောက်ဘဲ ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ဂျာမနီ အသင်းကို ၂-၁ နဲ ့နိုင်တဲ့ ပွဲမှာတော့ ချန်ပီယံခြေ ပြနိုင်ခဲ့တာတွေ ့ရပါတယ် ။ ဂျာမနီ နဲ ့ပွဲတုန်းက ခြေမျိုးကို သာ ဆက်ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ၊ သည်နေ ့ညပွဲမှာ အီတလီ အသင်းဟာ သရေ အနိမ့်ဆုံးကန်နိုင်ပါတယ် ။
ယူရို၂၀၀၈ နဲ ့ကမ္ဘာ ့ဖလား ချန်ပီယံ စပိန်ဟာ သည်နေ ့ညပွဲမှာ ထပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ၊ ယူရို ချန်ပီယံ ပြိုင်ပွဲမှာ ၂ကြိမ်ဆက်တိုက် ဗိုလ်စွဲတဲ့အသင်းအဖြစ် စံချိန်အသစ်တင်နိုင်မှာပါ ။
ဈေးအနေအထားအရ ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ရက်လောက်တုန်းက အာရှမှာ စပိန်ဟာ သရေအရှုံး ဖွင့်ခဲ့တာကနေ ၊ အခု သည်ပို ့စ်ကို ရေးနေတဲ့ အချိန်မှာ စပိန်ဟာ သရေကို ငါးဆယ်ရှုံး ဖြစ်နေပါတယ် ။ ဒါဟာ အီတလီ ဘက် ကို အားပေးတာများနေလို ့စပိန်ဈေးကျသွားတဲ့သဘောပါ ။
ဂိုးဈေးကတော့ သည်ပို ့စ်ကို စရေးနေတဲ့အချိန်မှာတုန်းက ၂ဂိုး ၅ဝ အရှုံးအနေအထားဖြစ်ခဲ့ပြီး ၊ သည်ပို ့စ် ကို ရေးပြီးခါနီး အချိန်မှာ ၂ဂိုးသရေ ဖြစ်နေပါပြီ ။ ဒါဟာ ဂိုးအနဲ ဘက် ကို အားပေးတာများလို ့ပါ ။
အာရှဘက်က ခန် ့မှန်းချက်များကတော့ “အီတလီ” ကို အားပေးဖို ့ညွှန်းထားပြီး ၊ ဥရောပဘက်က ဝက်ဆိုက်များကတော့ “စပိန်” အနိုင် ၁-၀/၂-၁ လို ့ခန် ့မှန်းပေးထားပါတယ် ။
ကျုပ်မောင်ပေ အနေနဲ ့သည်ဘက်ကဈေးကို မသိရသေးလို ့၊ ဘယ်အသင်းကို ဈေးခေါ်သူများက အနိုင်ခန် ့မှန်းထားသလဲ ဆိုတာ မတွက်နိုင်သေးပါဘူး ။ အဲဒါကြောင့်မို ့၊ အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားလေးတွေ ကို ဘဲ ရေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ညပိုင်းကြမှ ၊ သည်ပို ့စ်မှာဘဲ အက်ဒစ်ပြန်လုပ်ပြီး တစ်ခါ ၊ ကွန်မင့်ဖြင့်တစ်ဖုံ ပြန်ပြီး ရေးပါဦးမယ် ။
စာဖတ်သူများရဲ ့စိတ်ကြိုက်အသင်း ကို လဲ သိခွင့်ပြုပါနော။
……. အားလုံး အောင်မြင် ရွှင်လန်းပါစေ …….
ကြိုက်တာကတော့အောက်ပဲဗျို ့
သို ့သော်လည်း ဈေးသိပ်ကျရင်တော့အပေါ်ပြောင်းရင်ကောင်းမလားမှတ်တယ်
ညဈေးကြည် ့သေးတာပေါ ့
စိတ်ထင် မိနစ် ၉ဝ နဲ့ပြတ်မယ်ထင်တာဘဲ
အီတလီ နဲ ့စပိန်
အီတလီ က ပိုပြီး ခံစားအားပြု ကစားမယ်လို ့ထင်ပါတယ် ။
စပိန်တိုက်စစ်မှာ “ဘီဘာအို” အသင်းတိုက်စစ်မှူး “လော်ရန်တေး” ကို သုံးရင်ကောင်းမယ်လို ့ထင်ပါတယ် ။
““ ဂိုးအနဲ ”” ဟာ အောင်မြင်ဖို ့၅၀% အထက်မှာ ရှိနေတာ အသေချာပါဘဲ ။
ကိုပေရေ…အီတလီက ခံစစ်ကစားရာမှာ စပိန်ထက်ပိုတော်တယ်နော်။ ဒါကြောင့် ဂိုးအောက်နဲ့ အီတလီကိုပဲ ကြိုက်တယ်ဗျို့
ကျုပ်လဲ ဆြာခင့်ကို ၄စားသွားဘီ
ကျုပ် ဆြာခင့်ကို ခင်သလို .. ဆြာခင်က ကျုပ်ကို တဖန်ပြန်ခင် လို့
စပိန်ကို ပုံအောလိုက်တော့မယ်ဗျာ ………….
မောင်ဂီ နဲ့ ကြောင်ဝလေး တို့ တော့ အသဲကွဲ ကာ နီးပြီ။
မောင်ဂီ က ပိုဆိုးမှာ။ ဘီဘီ နဲ့ ပါ လွဲမှာမို့။
ငိုဇယာလား … မငိုပါဘူး…
ဂလောက် မြန်တဲ့အသင်း ကို အမြန်ဆော့မှတော့ နားကားပီပေါ့…
အုပ်စုပွဲတုံးက ပုံစံအတိုင်း ၂ဂိုးတောင် ပေးလိုက်ရတာလည်း
အမှတ်မရှိလို့ ခံရတာ ….
အော်… အဲ့လိုနဲ့ …ကျုပ်တောင် သုံးဇယ် နား နီးပါပေါ့လား …
အမျှ၊ အမျှ၊ အမျှ ကြောင်ဝလေး အသဲ
After that3inarow for Spain.
Oppsss.. one more Goal.
Bye Bye Italy. :-)
နံပါတ် (၁၉) ခမျာ ငို နေတာ မှ တော်တော် နဲ့ မရပ်ဘူး။
စပိန် က ကလေးလေး တွေ စပိန်ဝတ်စုံ တွေ နဲ့ ကွင်းထဲ မှာ ရောက်လာပြီ။
ပြေးပြီး သူတို့ ကို ဓာတ်ပုံရိုက်။ ချစ်စရာ့ အရွယ် မှာ ဝင်ပြိုင် လိုက်ချင်သေး။
ကျွန်တော်လဲ ငိုချင်နေတာနော် လက်မတို့ပါနဲ့
အဘလစ်ပီရေ ရှင်ကတော့ အနိုင်နဲ့ပိုင်းသွားတယ်
ကဲ ကဲ နောက်မှ အသဲကွဲ အခုတော့ အိပ်တော့။ ;-)
အရှေ့ကျွန်းမင်းသား လဲ စောစောစီးစီး မျက်ရည် နဲ့ မျက်နှာသစ်နေလောက်ပြီ။
ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် ၁၄ရက်နေ့ တိုကီယို သွားမယ် ..ဒါဗျဲ….
လိုက်ချင်လိုက် မလိုက်ချင်နေကြ …
ဖက်ပီးငိုဖို့ ပခုံး တဖက်ကို ငှားပါလေ ….
အိုဘယ့် … မရှိခန ဒို့ မမ ရယ်…
ဒဏ်ရာပြသနာတွေကြောင့် ထင်တိုင်းမပေါက်ခဲ့တာကို နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်
ငါကတော့ အဇူရီရဲ့ ထာဝရပရိတ်သတ်ပါ
ဂုဏ်ယူပါတယ် အဇူရီ ယူရို၂၀၁၂ ဒုတိယဆုရှင်
အီတလီ အသင်းသား တော်တော်များများ သူများ လက်ထဲ ပါသွားတဲ့ ဖလား ကို ကြည့်ပြီး ငိုနေကြတယ်။
“The Best Team Win” ပါဘဲ လို့ တွေးလိုက်ပါတယ်။ :-)
ကြိုးစားဖို့ အချိန် နှစ်နှစ်ရပါတယ်
အနှီဆင်းန်းဒွေ မကြည့်ချင်လို့ …တီဗီပလပ်ကို ခြေညှိုးခြေမ ညှပ် ဖြုတ်ခဲ့တဲ့ …ဘွ …
အီတလီလည်းကွဲ၊ ကျတော်လည်းရူံး ဟားဟားဟား………
မနေ့ညက ရွာထဲကို လုံးဝ ဝင်လို့မရခဲ့ပါ
ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုသွားသူအားလုံးနှင့် ကွန်မင့်များ ချီးမြှင့်ပေးခဲ့သော မိတ်ဆွေအားလုံးအား လေးစား ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
သူကြီးဆာဗာ အတိုက်ခိုက်ခံနေရပြီလားမသိ ။ ကျွန်တော်လည်း ဝင်မရပါ ။ အခြားဆိုဒ်များဝင်၍ ရပါသည်။
စပိန် အသင်းက လူတွေ မှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ဗျာ .. မှော်ဆရာ တွေ မှော်အတတ် နဲ့ ပြုစားနေသလိုပဲ … ပထမ တစ်ဂိုး .. နောက် .. တစ်ဂိုး .. အဲ့ဒီ့ ထဲက သိပြီးသား .. .. ခုတော့ Euro ရာဇဝင် ကိုချိုးဖျက်လိုက်ပုံများ … လွှတ်အားရ စရာ ကိုးဗျ …. လေးစားပါတယ် စပိန်။ မိနစ် ၅ဝ ကျော် သွားတော့ ကြည့်ရင်းနဲ့ အီတလီ တွေကို အားတောင် နာလာတယ် … အတည်ပြောဒါဘာ …။
မျက်ရည် မဆဲ ပါဘူးဆိုမှ….